Programmer's Diary: ခင်ဗျား အရင်အတိုင်း မဟုတ်တော့ဘူး ရန်ကုန်
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 5:23 PM
By the time, the fruit is ripen, we will come back to serve our motherland.
အရင်အတိုင်းမဟုတ်ဆို တို့ကို အစိမ်းရောင် မုဒိန်းတန္တတတွေ မစာမနာ ၀ိုင်းဝန်းဖျက်ဆီးလိုက်လို့ ကျမမှာ အရွယ်လွန်ပြည့်တန်ဆာ တယောက်ဘ၀နဲ့ ကျက်သရေဆုတ်ယုတ်နေခဲ့တာ အနှစ်၂၀ တောင် ကြာခဲ့ပြီကောရှင်။
June 03, 2009 10:26 PM
So after 10 years at singapore,
That's why we talk about...
you need to used to it..
Only once in 10 years come back and don't expect too much..
:-) don't you feel like you are in the "Back to the Future" movie? Other countries are in 21th century, but our beloved motherland doesn't even get to the 20th century yet.
Hi...Congratulation "Nyi Nyi".Your post is so nice & right..But., you forget one thing..you can't compare to YANGON & SINGAPORE..Because these two are different..Everything have no completion.....Example...: so many peoples in the world..so many different language & different colour of the skins....YANGON's never become likes SINGAPORE...NEVER & EVER...MY FRIENDS
Reply To Myint
I'm not comparing Ygn and SG. I know these two are totally different. But, u can't juz blindly said no complaint is allowed since these two are inequal. Shouldn't we need to find out the root cause what makes us different from SG? Is it due to our ineffective way to handling matters? Or simply put, Is it due to the red tape system?
Like u said, nothing is perfect. But, I merely explained the different situations over the immigration counters in both Ygn and SG. It is ridiculous to be checked if the income taxes were duly paid or whatsoever to myanmar nationals. Let me ask if the Ministry of Immigration and Population takes over Ministry of Finance and Revenue in Myanmar.
If SG can get rid of such rep tape system for smooth processing over the immigration counter, tell me why we burmese can do the same and not to be bribed under daylight by corrupted officials.
Everyone knows we have red tape system in Myanmar. We have corrputed officials who are taking advantage of that system, we have people who are supportive of that system and we have people who are against that system. Although we all have the rights to support or against that abusive system, that will decide if u r creditable enough. Thank you.
ခင်ဗျား ပြောင်းလဲဖို့ အသင့်ဖြစ်တဲ့ အခါ ကျုပ်ရော ကျုပ်သူငယ်ချင်းတွေပါ ခင်ဗျားဆီ ဆက်ဆက် ပြန်ခဲ့မယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
ရန်ကုန်ကြီး အမြင်မှန်ရတော့မှ ပြန်လာခဲ့တော့မယ်ပေါ့နော် ကိုညီ။ သူ့ကို တတ်နိုင်သလောက်လေး ပြုပြင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ရင်ရော မကောင်းဘူးလားဗျာ။ သူနဲ့ ငယ်ပေါင်းတွေ ဆိုရင်ပေါ့လေ။ ကျွန်တော်ကတော့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ် ထင်တာပဲ။
ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ပြုပြင်ဖို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ် ဆိုပြီး “တာဝန်” အရ လုပ်ရမယ်ဆိုတာထက် ပြုပြင်ချင်စိတ် ရှိသူတွေက တာဝန်အရ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်နဲ့ တတ်စွမ်းသရွေ့ ပြုပြင်ကြမယ်ဆို ပိုကောင်းမှာပါ။ ရန်ကုန်မြို့ကြီး ပြောင်းလဲဖို့ အသင့်မဖြစ်သေးရင်တောင် ကျွန်တော် ပြန်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ အခါကျရင် ဘယ်လို အခြေအနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် ပြန်လာခဲ့မှာပါ။ လောလောဆယ်တော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအနုပညာကို ကျွန်တော် သင်ယူခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားရပါဦးမယ်။
ခင်ဗျားကို ပြန်လာပါလို့လဲ ဘယ်သူမှမခေါ်ဘူး
ကျုပ်ကိုအပြစ်တင်ရအောင် ခင်ဗျားကရောဘယ်လောက်များ ကောင်းနေလို့လဲ
ခင်ဗျားက ရန်ကုန် နေရာကို ၀င်ယူပြီး ကျုပ်ကို ဆူချင်ငေါက်ချင်သေးတာလား။
ဘယ်သူခေါ်ခေါ် မခေါ်ခေါ် ရန်ကုန်ဆိုတာ ကျုပ်ဇာတိမြေ ကျုပ်ချစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် ဖြစ်လို့ ကျုပ်က အခါအခွင့်သင့်တိုင်း ပြန်လာနေဦးမှာပဲ။ ကျုပ်သာ မနေချင်လို့ စွန့်ချင်သပဆို ကျုပ် မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ်က စွန့်ပြီးတာ ကြာလှပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားလို လူစားမျိုးကတော့ ကျုပ်ပြန်လာရင် လာကြိုဖို့ မစဉ်းစားလေနဲ့ဗျို့။ ခင်ဗျား လာကြိုလည်း ကောင်းသော ကြိုခြင်း မဟုတ်မှာ ကျုပ်က ကြိုသိနေတာ မဆန်းဘူးလားဗျာ။ သေချာတာကတော့ ခင်ဗျားလို လူစားမျိုးတွေ များလာလို့ ရန်ကုန်ဟာ အရင်အတိုင်း မဟုတ်တော့တာဘဲ။
သူများတွေသိအောင်လို့ ပြချင်လို့ ပါ...
ကိုညီညီ ကလည်းဗျာ ရန်ကုန်က အရင်အတိုင်းမဟုတ်လို့ မနေချင်ရင်လည်း နေပြည်တော်ကြက်ပြေးမှာပြောင်းနေလေဗျာ..ဟို..ဟို...ပေါင်မုန့်မရှိရင် ကိတ်မုန့်စားပေါ့.အဲ့ဒီဟာကို.ရန်ကုန်က
ဒီလိုဗျ.ကျန်တဲ့မြို့တွေ ဖွံဖြိုးတိုးတက်နေပြီးဆိုတော့ ရန်
ကုန်မြို့ကြီးကို ပြတိုက်လုပ်ဖို့ ထားရတာလေဗျာ..တော်ကြာ စစ်အစိုးမင်းတက်တုန်းက ဒီလို ဟော ခုဒီလို နှိုင်းယှဉ်ပြစရာမရှိမှာစိုးလို့တဲ့ အနှိပ်ခန်းတွေလား. ဒါက ညောင်းနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ဖွင့်ထားတာလေ ခင်ဗျားကျမ်းမာရေးကောင်းရင် အညောင်းမခံနဲ့လေ အဲ့ဒါက ညောင်းလေ့ ညာလေ့ရှိတဲ့ လူကြီး (လူကြီးဆိုတိုင်းအသက်ကြီးတယ်မထင်နဲ့ဗျာ.ဟို လူကြီးဆိုတာသိတယ်မှလား လူကြီးဆိုတာ လူကြီးပေါ့ဗျာ)တွေအတွက်ဖွင့်ထားတာဗျာ..နှိပ်ပေးရတဲ့သူတွေထဲမှာ သူတို့အမျိူးတွေမှမပါသေးပဲဟာ..မီးပျက်တာလား ဒါချွေတာနေတာ သူများနိုင်ငံတွေမှာ ညစာစားပွဲတွေမှာ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေထွန်းပြီးစားတာလေဗျာ..အဲ့ဒီလိုပွဲတွေကို အတုယူစေချင်တာ..ခေတ်မီဖွံဖြိုးတယ်ဆိုတာလည်းပြရင်းပေါ့..ဟိုတလောက မီးပွိုင့်တွေမီးလာနေလို့ သတင်းအဖြစ်ထူးထူးဆန်းဆန်း ပြောနေရသေးတယ်လေ.ဗျာ..ကိုယ့်အမျိူးတွေဖွံဖြိုးတိုးတက်နေသရွေ့ ကျန်တဲ့သူတွေ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ ခင်ဗျားပြောတာတွေဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲဗျာ..ခင်ဗျားဘယ်သူဘယ်ဝါသိသွားလို့...ဟင်း ရန်ကုန်ကိုတောင် အရင်အတိုင်း ခင်ဗျားကိုလည်း လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့အတိုင်း မပြန်ရ လုပ်လိုက်ဦးမယ်..၇န်ကုန်က..
ကုိုယ်လက်ဝါးကြီး အုပ်ဖုို့အတွက် ဖိနှိပ်ချင်တဲ့ သားသမီးတွေ ရှိတယ်..
ကုိုယ်လက်ဝါးကြီး မအုပ်ရလုို့ ကဖျက်ယဖျက် လုပ်နေတဲ့ သားသမီးတွေ ရှိတယ်..
ညံ့ဖျင်းချက်မှန်သမျှ လွှဲချစရာ ခပ်ညံ့ညံ့ အုပ်ချုပ်သူရှိနေတဲ့အတွက် အဲဒါကုို အသုံးချပီး တုိုးတက်ရာတုိုးတက်ကြောင်းကုို မရှာကြံတော့ပဲ စည်းပျက်ကမ်းပျက် လေနေကြတဲ့ သားသမီးတွေလဲ ရှိတယ်..
သာမှ ပြန်ပေါင်းပါမယ်ဆုိုတဲ့ သားသမီးတွေလဲရှိတယ်..
ကုိုယ်လွတ်ရုံးသွားပီး အချိန်တန်နှာခေါင်းရှုတ်လုို့ အပြစ်တင်ရုံလောက် မြင်တော့တဲ့ သားသမီးတွေလဲရှိတယ်..
အင်း.. ဒီရန်ကုန်ဟာ အရင်လုိုမဟုတ်တာ ဘာဆန်းလဲဗျာ..
ဒီ ကိုရန်ကုန် ကိုသေခန်းဖြတ် ရှင်ခန်းဖြတ် အကုန်ဖြတ်ထားခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီ၊ကိုညီရေးလိုက်တော့လဲလွမ်းတော့လွမ်းမိသား၊လွမ်းစရာရှိပေတဲ့ နာစရာနဲ့ဖြေရပေအုန်းတော့မပေါ့၊ နာစရာနဲ့ဖြေတော့လဲ
နာစ၇ာတွေကလဲမနည်းလှပါ ။ ရင်နာစရာတွေ ၊အော့နှလုံးနာစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်လို့
June 05, 2010 11:34 AM
ရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးက သဘောတော့ကျချင်စရာပဲ့ လက်တွေ့ အများကောင်းစားရေးအတွက်လုပ်နေတဲ့လူဆိုရင်ပေါ့ ဘယ်လိုလဲ ကိုယ့်လူ အကြီးကြီးတွေလျှောက်ပြောပြီး ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ရော ဘာတွေများလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ။ ခင်ဗျား အခု ဘယ်သူတွေကောင်းစားရေးအတွက် လုပ်နေလဲ ခုသားကောင် ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းမ တွေထဲက ဘယ်နှစ်ယောက်များ ခင်ဗျား လက်တွေ့ ကယ်တင်ခဲ့ဖူးလဲ။ ပြောပြနိုင်မလား ကိုယ့်လူ။ နောက်မှ အဆင့်သင့် မှ လုပ်မယ်ဆိုတာ လူဆိုတဲ့ အဆင့်တန်းမရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေ လုပ်ကြတယ် တိုယ့်လူ လူဆို တာဝန်သိစိတ် တာဝန်ယူရဲတဲ့ သတ္တိ ရှိမှ လူလို့ခေါ်လို့ရတယ် ခင်ဗျားလဲလူ ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် မဖြစ်သေးရင်လဲ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ခင်ဗျားအတွက် ကျွန်တော် ဂုဏ်ယူချင်ပါတယ်ဗျာ။ pls visit it;;;
http://picasaweb.google.com/eden.ukm.mls ဖြစ်အောင်တော့လာခဲ့ဗျာ လက်တွေ့လုပ်ချင်ရင်ပေါ့ဗျာ စကားတွေနဲ့ ဘာကိုမှ တည်ဆောက်လို့မရဘူးဗျ။ ရွေ့လျားမှုရှိမှ အလုပ်တွေက ပြီးမြောက်တာပါ။ နိုးထပါလော့ နွားစာခွက် အသိလောက်နဲ့တော့ ကမ္ဘာကြီးကို ကြည့်လို့မရဘူး ကိုယ့်လူ။ နွားစာခွက်ထဲက ထွက်လာခဲ့လော့ သူများ တည်ဆောက်ပြီးသား နေရာပေါ်မှာ အခန့်သားအခွင့်ရေး ၁၀ စုနှစ်လောက်သွားခံစားနေပြီး နွားစာခွက်အတွေးခေါ်တွေနဲ့ အသုံးမကျတဲ့ စကားတွေကို ရပ်လိုက်ပါတော့ နိုးထပါလော့
June 05, 2010 11:46 AM
ဟုတ်တယ်ဗျာ ... ရန်ကုန်မှာတင် မဟုတ်ပါဘူး
တိုးတက်လာတာကတော့ စည်ဘီယာဆိုင် နဲ့
Massage တွေပဲ ... ထင်မိတယ် ။